मध्य बर्खामै खडेरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १४, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — तपाईंका घरमा दैनिक एक किलोभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ ? फोहोरका रूपमा के–के फाल्ने गर्नुभएको छ ? प्लास्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा ? वा कुहिने फोहोर र बासी खाना पनि ?
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर छुट्याएर फाल्ने गरिएको छैन । फोहोर छानेर छुट्याउने कर्मचारी नभएको महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उप्रेती भने आफूहरू फोहोर छुट्याउने काममा इच्छुक रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी पनि हामी दिन्छौं, महानगरलाई मासिक १ लाख पनि तिर्न तयार छौं,’ उप्रेतीले भने । एकीकृत पुन:प्रयोगीयका प्रबन्धक तामाङले पनि महानगरले नदिएको गुनासो गरे । संघले विभागमा यसबारे प्रस्ताव पनि बुझाएको छ । कुँवर भने प्रस्ताव हालेकै भरमा कुनै संस्थालाई फोहोर जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ २१:३६